Ehong Kong - ALinks
Amanqaku eHong Kong
Ufumana njani umsebenzi eHong Kong?
January 10, 2022 UAntika Kumari Hong Kong, imisebenzi
IHong Kong ibonelela ngamathemba omsebenzi awodwa okwahlula-hlulwa, iziko lezezimali kwihlabathi liphela, kunye neendlela ezinqamlezileyo phakathi kweMpuma neNtshona. Kwaye ngelixa ufuna ukufumana umsebenzi ukuze uqale ukusebenza eHong Kong, imisebenzi ethile iyafaneleka
Ungasifaka njani isicelo seVisa yaseHong Kong?
Novemba 18, 2021 UMaitri Jha Hong Kong, hamba
IHong Kong yenye yezona ndawo zibalaseleyo zokutyelela ngexesha lakho leholide, kwaye ukuba uceba ukutyelela, kufuneka uqale ujonge iimfuno ze-visa. Ungasifaka njani isicelo seVisa yaseHong Kong? 1) Ungasifaka isicelo sakho ku
I-visa yaseHong Kong yamaNdiya
Oktobha 21, 2020 UMaitri Jha Hong Kong, ivisa
Ngeendawo ezininzi ezidumileyo kunye namathuba okubona indawo, iHong Kong isikelelekile. Uya kufumana izinto ezininzi ukuzibona nokuzenza. Abemi abavela kumazwe angama-170 kunye nemimandla banokutyelela eHong Kong ngaphandle kwevisa. Kwaye, kuxhomekeke kubuzwe,
Iidyunivesithi eziyi-10 ezihle kakhulu eHong Kong
Juni 17, 2020 UAntika Kumari Hong Kong, isifundo
Kukho malunga nee-Dyunivesithi ezingama-22 eziwonga amabhaso eHong Kong. Ezisibhozo zazo zikarhulumente kwaye ezinye iiyunivesithi ziyimfihlo. Uninzi lweeklasi, zonke iidyunivesithi ezisibhozo zaseHong Kong zisebenzisa isiNgesi. Apha ngezantsi uluhlu
Izibhedlele ezigqibeleleyo zabucala eHong Kong
Aprili 12, 2020 IShubham Sharma impilo, Hong Kong
IHong Kong sesinye sezixeko ezisempilweni kwihlabathi. Iinkonzo zononophelo lwempilo esixekweni zigcine umgangatho ophezulu. Ixesha lokuphila laseHong Kong liphezulu kwihlabathi elijikeleze iminyaka engama-85. Hong Kong's
Ezemfundo kunye nezikolo eHong Kong !!
Februwari 24, 2020 UKaruna Chandna Hong Kong, isikolo
Izona zikolo ziBalaseleyo eHong Kong! Inkqubo yezemfundo eHong Kong isekwe kwinkqubo yase-UK. Kwaye ilawulwa liZiko leMfundo kunye neSebe lezeNtlalontle. Zininzi iZikolo zamanye amazwe eHong Kong. Banga
Yintoni irente yeNdlu kunye neendleko zokuphila e-HonKong
Februwari 19, 2020 IShubham Sharma Hong Kong, izindlu
IHongkong yeyona ndawo eshushu kwaye ikuluhlu lokujonga bonke abakhweli. Kodwa ubusithanda isixeko kangangokuba ufuna ukuhlala apho kunokuqala kufuneka ube nomsebenzi olungileyo onokuthi ujonge kuwo
Iindlela zeZothutho eHong Kong
Februwari 17, 2020 UAntika Kumari yibakhona, Hong Kong
Iindlela zothutho eHong Kong ziyakwazi ukwanelisa zonke iimfuno zabakhenkethi. Uthutho lomhlaba lubandakanya iMTR, iiteksi, iibhasi, i-minibusses, kunye noohola bendlela. Kwakhona, iinkonzo zesikhephe phakathi kweKowloon kunye nesiqithi saseHong Kong, nakwiziqithi ezikude.
Ihotele ezintle eHong Kong
Februwari 10, 2020 UMaitri Jha Hong Kong, iihotele
Ngaba ujonga ezinye iihotele ezintle eHong Kong? IHong Kong yindawo yeyona ndawo intle kunye neehotele ezigudileyo. IHong Kong yenye yezona ndawo zintle zokhenketho emhlabeni. IHong Kong ine
Elona xesha lilungileyo lokutyelela eHong Kong
Februwari 10, 2020 UAntika Kumari Hong Kong, hamba
IHong Kong yenye yeedolophu ezinkulu ezityiwayo zehlabathi. Ngaphandle kwendlela, kukho imihlaba emangalisayo, kubandakanya iintaba ezintle kunye neepaki ezinkulu. Elona xesha lilungileyo lokundwendwela iHong Kong lixesha eliphakathi kuDisemba ukuya kuFebruwari. Xa ifayile ye-